Catharanthu roseus (क्याथारन्थु गुलाब) सदाबहार पातहरू मधुमेह बिरामीहरूका लागि फाइदाजनक – Sajha Pati
मधुमेह अनियमित खाने र अनियमित जीवनशैलीको कारण प्रायः मानिसहरू यस रोगबाट पीडित हुन्छन् । मधुमेह भएका व्यक्तिहरूले प्राय आफ्नो जीवनशैली र खाने बानीहरू परिवर्तन गर्नुपर्दछ, त्यसो गरे मात्र आफैलाई स्वस्थ राख्न सक्छन् । साथै धेरै औषधीहरूको सहारा लिनु पर्ने पनि हुनसक्छ । ताकि मधुमेहबाट नियन्त्रणमा रहन सकुन । शायद सबैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ औषधि बाहेक सदाबहारका पातहरू पनि मधुमेह रोगका लागि लाभदायक हुन्छन् ।
सदाबहार आयुर्वेद र चिनियाँ औषधिमा लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ र मधुमेह, मलेरिया, घाँटी दुखाइ र ल्युकेमिया जस्ता अवस्थाबाट बच्न सदाबहारको जडिबुटी उपचारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । सदाबहारले दुई सक्रिय यौगिकहरू एल्कालोइड्स र टेनिनहरू समावेश गर्दछ । सदाबहारको बोटमा १०० भन्दा बढी अल्कालोइडहरू भएको विश्वास गरिन्छ । जुन धेरै फाइदाजनक हुन्छन् ।
सदाबहार के हो ? :
यो सजिलैसँग जता ततै फेला पार्न सकिन्छ र यो मेडागास्करको मूल हो भनिन्छ । सदाबहार एक प्रकारको झाडी हो सजावटी बोटको रूपमा र औषधीय उद्देश्यहरूको कार्यका लागि प्रयोग गरिन्छ । यसको फूलहरू गुलाबी र सेतो रंगका हुन्छन् जुन चिल्लो, चम्किलो र यसको पातहरू गाढा हरियो रंगका हुन्छन् । टाइप २ मधुमेहको लागी एक प्राकृतिक औषधीको रूपमा काम गर्दछ ।
सदाबहार पातहरू मधुमेहका लागि खानाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ यो पूर्ण रूपमा प्रभावकारी हुन्छ । रगतमा चिनीको स्तर बढ्नबाट रोक्छ र नियन्त्रणमा राख्छ ।
मधुमेहको लागी सदाबहार कसरी प्रयोग गर्ने ? :
सदाबहारका ताजा हरिया पातहरू पहिले सुकाउने त्यसपछि राम्रोसँग पीसेर यसलाई हवा छिर्न नसक्ने कन्टेनरमा राख्नुहोस् । पाउडरको एक चम्मच दैनिक ताजा फलफूलको रस वा पानीसँग पिउनुहोस् । सदाबहार बोटको पातहरूको पाउडर स्वादमा भने अलिकति तीतो हुन्छ ।
एक दिनमा ३ देखि ४ भन्दा बढी पातहरू मुखमा राखेर बस चबाउनुले पनि रगतमा चिनीको स्तर कन्ट्रोल गर्छ ।
सदाबहार बोटको गुलाबी फूलहरूलाई एक कप पानीमा उमाल्ने र उमाले पछि पानीलाई छानेर यसलाई बिहान खाली पेटमा पिउने बानी बसाल्नुले पनि मधुमेहलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा राख्न सक्दछ ।
सदाबहारका अन्य फाइदाहरू : क्यान्सरको जोखिम कम गर्दछ :
क्यान्सरसँग लड्ने तत्वहरू सदाबहारको पातमा पाइन्छन्, ती शरीरमा क्यान्सर बढाउने कोषहरू हटाउन र ती मृत कोषहरूलाई निको पार्न मद्दत गर्दछन् । सदावहारको पातमा दुईवटा एल्कालोइडहरू फेला पर्दछन्, जसलाई भिन्क्रिस्टाइन र भिन्ब्लास्टाइन भनिन्छ । यी दुबैले एल्कलाइड केमोथेरापी समेत दिइन्छ । यसको साथ, यदि तपाईं क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सदाबहारका पातहरूको चटनी बनाएर सेवन गर्दा फलदायक हुन्छ ।
रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्छ :
सदाबहार पातमा हुने अल्कलाइड अजालिसिनले रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्छ । यसका साथै यसले उच्च रक्तचाप पछि तुरून्त कम गर्ने काम गर्दछ, यसको पातहरू नियमित चबाउने हने भने यसले रगतमा भएको चिनीलाई सधैंको लागि नियन्त्रणमा राख्न सक्छ ।
खुजलीबाट राहत ः सदाबहार पातहरूको प्रयोगले शरीरमा खुजली पनि हटाउन सकिन्छ । यसको लागि यसको पातबाट बाहिर आउने दूध जस्तो सेतो पदार्थलाई दैनिक रूपमा शरीरको खुजलीयुक्त (चिलाउने) भागमा लगाउदा चिलाउने समस्या केहि दिनहरूमा हराएर जान्छ ।
होल्डिङ्ग सेन्टरमा खानेपानी वितरण